Sfi Somaliska / Soomaali - lernia.se
Ugu yaraan 15 saacadood wiiggii ayaad wax dhigan doontaa, si af iswiidhiskaagu ugu fiicnaado sida ugu dhakhsaha badan ee suurtogalka ah. Waxanu kaa caawinaynaa in aad qorshayso waxbarashadaada si ay kuugu habboonaadaan adiga iyo waxad u baahantahay. Wakhtiyada iskuulku way kala duwanyihiin, magaalooyinka kala duwan. Ka wac Sfi Lernia lambarkan 0771 – 650 650 oo waydii wakhtiyada meesha aad degentahay. Waxa kale oo aad E-mail ku waydiin kartaa,
Raadi tababar kuu dhow: